वर्चुअल र हाइब्रिड घटनाक्रम प्लेटफार्म विकासको लागि एक्सेलेन्ट्स
किन छिटो हुन्छ
वृद्धि त्वरण फ्रेमवर्क
सेमिनारहरू र प्रशिक्षण
टिकट र पञ्जीकरण
मुख्य स्टेज र ब्रेकआउटहरू
एकीकृत प्रत्यक्ष स्ट्रीमिंग
प्रदर्शकहरू र प्रायोजकहरू
लग - इन निःशुल्क प्रयास गर्नुहोस् डेमो बुक गर्नुहोस्
निःशुल्क प्रयास गर्नुहोस् डेमो बुक गर्नुहोस्
Virtual & hybrid घटना प्लेटफर्म जुन ड्राइभ वृद्धि।
एक्सेलेभेन्ट्स एक सबै-इन-वन घटना प्लेटफर्म हो जसले तपाईंलाई तपाईंको पहुँच विस्तार गर्न, तपाईंको श्रोताहरूलाई संलग्न गराउन, सदाबहार समुदाय सिर्जना गर्न, र दिगो संगठनात्मक बृद्धि गर्न शक्ति प्रदान गर्दछ।
# १ घटनाहरूका लागि प्लेटफर्म बृद्धि त्वरण
प्रत्येक घटना यसको चुनौति र गोलहरूको अनौंठो सेटको साथ आउँछ। हामीले विशेष रूपमा घटना प्रविधिसँग सम्बन्धित जटिलताहरू कम गर्दा घटना टीमहरूले उनीहरूको विकास लक्ष्यहरू तीव्र पार्न मद्दत गर्न हाम्रो प्लेटफर्म डिजाइन गरेको छ। तपाईंको पहुँच विस्तार, तपाइँको उपस्थितहरूलाई संलग्न गराउनुहोस्, योग्य सीसा उत्पन्न गर्नुहोस्, तपाइँका प्रायोजकहरूलाई खुशी पार्नुहोस्, र एक्सेलेभेन्ट्सको साथ तपाइँको राजस्व बढाउनुहोस्।
हाम्रो विकास त्वरण फ्रेमवर्क हेर्नुहोस्
एक्सपो हल र प्रायोजकहरू
अन्वेषण गर्नुहोस् अनुभव
कुनै सीमाहरू नभएको प्लेटफर्ममा तपाईंको सिर्जनात्मकता र विशेषज्ञता थप्नुहोस्।
तपाईंको ब्रान्डको साथ र कोड बिना स्ट्यान्ड-आउट डिजिटल घटना वातावरण डिजाइन गर्नुहोस्।
टिकटहरू बेच्नुहोस्, सहभागीहरू दर्ता गर्नुहोस्, र मिनेट भित्रमा तपाईंको दर्शकहरू विभाजन गर्नुहोस्।
समूह र १: १ नेटवर्कि।
स्थायी जडानहरू सिर्जना गर्न घटना भर समुदायको भावना फोस्टर।
एक्स्बिबिटरहरू र प्रायोजकहरूलाई बढाइएको र मापने मूल्य प्रदान गरेर तपाईंको राजस्व बढाउनुहोस्।
तपाइँका उपस्थितहरूलाई विशेष कार्यहरू गर्न प्रोत्साहित गर्नुहोस् जुन उनीहरूको सगाईको लागि उनीहरूलाई इनाम दिनेछ।
तुरुन्त भर्खरको घटना डेटा पहुँच गर्नुहोस् तपाईंको प्रदर्शनलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि।
सेतो लेबल अनुभव
पूर्ण ब्रान्डेड कार्यक्रम वातावरण लन्च गर्नुहोस् यदि यो तपाईंको आफ्नै टेक्नोलोजी हो।
एक घटना होस्ट गर्नुहोस् जुन सुरक्षित, सुरक्षित छ, र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गर्दछ।
तपाईंको टेक्नोलोजी स्ट्याकको साथ एकीकृत गरेर पूरै फनेल प्रबन्ध गर्नुहोस्।
ग्राहक समर्थन हाम्रो DNA मा छ
२//24 वास्तविक व्यक्तिहरूबाट वास्तविक समर्थन
हाम्रो समर्पित समर्थन टीमसँग सँधै तपाईंको पछाडि हुन्छ, कुनै दिन वा समय फरक पर्दैन (यहाँ कुनै बूट छैन!)।
विस्तृत ज्ञान कोष र FAQ हरू
उत्पादन घटना कागजातको स every्ग्रह पहुँच गर्नुहोस् तपाईंको घटना विकासको बाटोको हरेक चरणलाई समर्थन गर्न।
उद्योग अन्तर्दृष्टि, उपयोगी संसाधन, र उत्पाद अपडेटहरू
तपाईंको दर्शकलाई संलग्न गराउने र नाप्ने परिणामहरू प्राप्त गर्ने असाधारण घटनाहरू कसरी सिर्जना गर्ने सिक्नुहोस्।
माथि 12,500 कम्पनीहरु र संगठनहरु का घटनाहरु मा Ac Accevents विश्वास छ।
हाम्रो ग्राहकहरु बोलेका छन् ...
एक पूर्ण प्याकेज जुन प्रयोग गर्न सजिलो छ र सेटअप गर्नुहोस्। लगातार सुधार हुँदैछ। समर्थन गजबको थियो!
गैर-नाफा संगठन व्यवस्थापन
प्रयोग गर्न एकदम सजिलो, छिटो र सिक्न सजिलो, अद्भुत ग्राहक सेवा, धेरै ज्ञानी स्टाफले मेरा सबै प्रश्नहरूको द्रुत जवाफ दिए, र एक ठूलो मूल्य।
उत्तरी केन्टकीको ब्रेन चोट अलायन्स
प्लेटफर्मको सुविधाहरू सेट अप गर्न सजिलो छ, ढाँचामा रचनात्मक, र सहभागीहरूले सहज प्रयोगको अनुमति दिन्छ।
एक्सपो घटना सुविधाहरू हाम्रो विद्यार्थी परियोजना सम्मेलनको लागि उपयुक्त थिए। समर्थन घटनाको अघि र समयमा दुवै उल्लेखनीय थियो।
द्रुत सुविधाहरू धेरै सहज र प्रयोग गर्न सजिलो छ। ग्राहक सेवा अद्भुत छ र अनुभवलाई अझ राम्रो बनाउँदछ!
टेक्सास स्कूल बोर्डहरूको संघ
द्रुत समर्थन प्रतिक्रिया महान छ! साथै, हामी प्लेटफर्मको कस्टमाइज गर्न योग्य छ। निरन्तर अपग्रेड पनि राम्रो छ किनकि हामी प्रतिक्रिया प्रदान गर्दा सुन्को महसुस गर्दछौं।
आफ्नो प्राप्त गर्नुहोस् सिक्न on
घटनाहरू, प्रविधि, क्यारियर बृद्धि र अधिकमा हाम्रो पछिल्लो अन्तर्दृष्टि पढ्नुहोस्।
Event कार्यक्रम बजेट गर्ने सल्लाहहरू हरेक घटना योजनाकारलाई थाहा पाउनुपर्दछ
१ Re कारण किन तपाईंले एक सबै-मा-एक घटना प्लेटफर्म छान्नु पर्छ
एक सफल अनलाइन शिखर सम्मेलन कसरी बनाउने भनेर तपाइँ सबैलाई जान्न आवश्यक पर्दछ
7 कारण किन भर्चुअल घटनाहरू एक आवश्यक मार्केटिंग उपकरण हो
नयाँ सुविधाहरू जुन तपाईं एक अनलाइन घटना योजना प्लेटफर्ममा चाहनुहुन्छ
शीर्ष Fac कारकहरू तपाइँले तपाइँको हाइब्रिड घटना सुरक्षित राख्नको लागि विचार गर्नुपर्छ
Best उत्तम घटना मार्केटि Strate रणनीतिहरू तपाईंको हाइब्रिड घटना अनुभवहरू बढावा दिन
एक स्थायी भर्चुअल वा संकर सम्मेलन होस्टिंग गर्दा शीर्ष Top कारकहरू विचार गर्न
संकर घटना स्थल छनौट गर्दा के विचार गर्ने
भर्चुअल घटनाहरूको वरिपरि अटेंडि अपेक्षाहरू कसरी प्रबन्ध गर्ने
एक हाइब्रिड घटनाको साथमा राजस्व निर्माण गर्ने १२ तरिकाहरू
आभासी र हाइब्रिड घटनाक्रमहरूको लागि नेतृत्व पुन: प्राप्ति
घटनाक्रम विकसित हुँदैछन्। कहिल्यै हराउनु हुँदैन।
हाम्रो भर्खरको समाचार, रणनीति, रणनीति, विचार, उत्पादन अपडेट र अधिक प्राप्त गर्न हाम्रो न्यूजलेटरको लागि साइन अप गर्नुहोस्।
एक्सेलेन्ट्समा सम्मिलित हुनुहोस्
ब्लगहरु र अंतर्दृष्टि
प्रतिलिपि अधिकार २०२१ द्रुत गति
गोपनीयता नीति उपयोग नियम